Rayson eRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko Ikhoyili elula ephaketheni elula iqhume umatilasi usayizi ophakeme ophakathi oqinile ohlinzeka phezulu
Ukuthunyelwa okuphephile kungaqinisekiswa kokwethu.
Siyathembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende ephephile futhi ezwakala. Uma unanoma yimiphi imibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi nge yethu, sishayele ngqo. Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufika ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazobheka inqubo ngayinye ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Omatilasi bakho kufanele bahlale isikhathi esingakanani? Njalo umatilasi wehlukile. Uma uphonsa ebusuku noma uvuka ubuhlungu sekuyisikhathi sokuthola umatilasi omusha kungakhathalekile ukuthi uneminyaka emingaki. Sincoma ukuhlola umaki womthetho bese ushintsha okungenani njalo eminyakeni eyisishiyagalombili.Ngingawathola kanjani amasampuli？ Ngemuva kokuthi uqinisekise ukunikezwa kwethu futhi usithumelele izindleko zesampula, sizoqeda isampula kungakapheli izinsuku eziyi-15 ~ 20. Ungacela inkampani evelele ukuthi ithathe isampula enkampanini yethu noma ungasithumela i-DHL, FedEx noma i-UPS iqoqe inombolo ye-akhawunti, singakuthumela isampula kuwe nge-akhawunti yakho.Ngabe ngivakashela imboni yakho? Yebo, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza saseGuangzhou Baiyun, kungathatha ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlela imoto ukukucosha.